ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး. ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်
ⓘ ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး. ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးသည် ၁၈၆၅ ခုနှစ်မှ စတင် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွ ..
ⓘ ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးသည် ၁၈၆၅ ခုနှစ်မှ စတင် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံပိုင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မှန်ကန်မြန်ဆန်စေရေးနှင့် ခရီးသွားပြည်သူများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးတွင် စက်ရှိရေယာဉ်၊ စက်မဲ့တွဲနှင့် ဆိပ်ခံတွဲ စုစုပေါင်း ၃၉၀စီး ရှိပြီး နှစ်စဉ် ခရီးသည် ၁၅.၀၆သန်း၊ ကုန်တန်ချိန် ၂.၀၇သန်း တို့အား ဈေးနှုန်း ချိုသာစွာဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးလျက် ရှိသည်။ အဓိကဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရေယာဉ်များ သွားလာနိုင်သည့် မြစ်ကြီးများဖြစ်သည့် ဧရာဝတီမြစ်၊ ချင်းတွင်းမြစ်၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများ၊ ရခိုင်၊ မွန်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ မြစ်ကြောင်းများတွင် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ခရီးသည်နှင့် မော်တော်ယာဉ်များ သွားလာမှု အဆင်ပြေစေရေးအတွက် ကူးတို့လမ်းများ ပြေးဆွဲခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏မူလအဖွဲ့အစည်းမှာ ဧရာဝတီ ဖလော်တီလာ ကုမ္ပဏီ Irrawaddy Flotilla Co., Ltd ဖြစ်ပြီး ၁၈၆၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည့် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ၁၉၄၈ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက် တွင်ယင်းကုမ္ပဏီအား ပြည်သူပိုင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ "ပြည်တွင်းရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့" အမည်ဖြင့် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ် ဖော်ဆောင်မှုအစီအစဉ်အရ ၁၉၇၂ ခုနှစ် မတ်လ ၁ရက် တွင် "ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း" အမည်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် "ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး" အမည်ဖြင့် လည်းကောင်း ပြောင်းလဲ၍ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ဆောင်ပုဒ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ က ရေယာဉ်နှင့် ခရီးသည် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ခ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်မှု အပြည့်အဝပေးရေး၊ ဂ လုပ်ငန်းခွင် အသွင်အပြင် ကောင်းမွန်ရေး၊
4. ဌာနအလံနှင့် ဌာနအမှတ်အသား
ဌာန၏ အလံမှာ အစိမ်း၊ အဝါ၊ အပြာဖြစ်သော ၃ရောင်ခြယ် အလံဖြစ်သည်။ အစိမ်းရောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သစ်တောနှင့် ကုန်းမြေများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အဝါရောင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ရှိသော စပါးအပါအဝင် သီးနှံများကို ကိုယ်စားပြု၍၊ အပြာရောင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြစ်ချောင်း၊ အင်းအိုင်၊ ပင်လယ်ကို ကိုယ်စားပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အလံ၏ အချိုးအစားဖြစ်သည့် အနံနှင့် အလျားကို ၁:၁.၂၅ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည်။
ဌာန၏ အမှတ်အသားကို ဟင်္သာငှက်ဖြင့် ပြသထားသည်။ ပြည်တွင်း ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ရေယာဉ်များ၏ ခေါင်းတိုင်များအား အနက်၊ အနီ၊ အနက် ၃ဆင့်ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း အမှတ်အသားပြုထားသည်။
၃၁.၁၂.၂၀၀၆ နေ့ရှိ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသော ရေယာဉ်အင်အားမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဌာနခွဲ ၆ခုတွင် ခရီးသည်နှင့် ကုန်တင်ခရီးလမ်းပေါင်း ၆၀ခန့် ရှိသည်။ ယင်းတို့အနက် အဓိကကျသည့် ခရီးလမ်းများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားဖြင့် ဖေါ်ပြထားသည်။
ကုန်ပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲမှ တွန်းသင်္ဘော" ဆင်ဟိုင်း" ရေယာဉ်
ကုန်ပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲမှ ခရီးသည်/ကုန်တင်" မြဒီပါ" ရေယာဉ်
Wikipedia: ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး
ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦ ..